သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့အသွားအလာတိုးမြှင့်နိုင်သည့်နည်းလမ်း ၂၅ ခု - Nicheonlinetraffic
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း website အတွက် traffic ဖောက်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါဧည့်သည်အများစု၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်သည့်ယာဉ်ကြောပို, ပိုမြင့်။ သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာအသွားအလာကိုဆွဲဆောင်ဖို့ပိုလုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ website ကိုရန်အသွားအလာတိုးမြှင့်နိုင်သည့်မှတဆင့်နည်းလမ်းတွေသို့ကြည့်ဖို့သွားနေကြပါတယ်။
1 ။ ကြော်ငြာ
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြော်ငြာခြင်းသည်သင်ဘာမှမလုပ်မီပထမဆုံးပြုလုပ်သင့်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ အခကြေးငွေရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြသထားသောကြော်ငြာများကဲ့သို့ကြော်ငြာနိုင်သည်။ ကြော်ငြာခြင်းသည် visitors ည့်သည်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ဆိုက်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်းတို့အတွက်များစွာအကျိုးရှိသည်။
သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက် outbid ဖို့ကြိုးစားအဖြစ်ကြော်ငြာစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်ပေးဆောင်။
2 ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းများအားဖြင့်သင်တို့၏အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရန်
လူမှုမီဒီယာမှတဆင့်, သင်သည်သင်၏နောက်လိုက်များထွက်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကို Twitter, LinkedIn, Facebook, သို့မဟုတ် Google+ ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ရုံကို click ပြီးပိုကြည့်ရှုရန်သင့်ကြည့်ရှုဆွဲရန်သွေးဆောင်တစ်ခုခုနှင့်အတူတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Google+ မှာသင်တို့ကိုလည်း B2B ထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်အကြီးအဖြစ်နိုင်သည့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုကိုစိတ်တိုင်းကျအတွက်ကူညီပေးသည်။
သူတို့အကြီးအကျယ်ပုံရိပ်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးကတည်းက B2C ထုတ်ကုန်များအတွက်, သငျသညျ Pinterest လိုဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းကြောင်းများထွက်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
3 ။ အဆိုပါ website တွင်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး post
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလူဦးကွဲပြားခြားနားသောအရသာရှိသည်နားလည်သင့်တယ်။ ထို့ကွောငျ့, တတ်နိုင်သမျှအများအပြားလာရောက်လည်ပတ်သူများအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းဆီးဖို့အဖြစ်ဒါကြောင့်သင့်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအရောအနှောရှိသည်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အခြားသူများရှည်လျားပီပီအပိုငျးပိုငျးကိုချစ်နေချိန်မှာဆောင်းပါးအတိုအပိုငျးပိုငျးဖတ်နေချစ်သောသူတို့သည်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အခြားသူတွေဗီဒီယိုများကြိုက်တတ်တဲ့စဉ် infographics ခစျြတဲ့သူတချို့ရှိပါတယ်။
4 ။ ဆွဲဆောင်မှုခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အတူတက်လာကြ
ကြာကြာနေဖို့ရန်ဧည့်သည်လာပြီတစ်ခုမှာလမ်းတစ်ခုတွန်းလှန်ခေါင်းစဉ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအမြဲပိုပြီးသိရန်လိုသည့်ဧည့်သည် / စာဖတ်သူကိုစောင့်ရှောက်လော့။ တစ်ဦးကမှတ်မိလွယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်သင်သည်သင်၏ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအကြောင်းပိုမိုသိရန်သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များအတွက် thurst ရှိအောင်ပါလိမ့်မယ်။
5 ။ တွင်-စာမျက်နှာ SEO ဆိုသည်မှာကိုသုံးပါ
သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအသွားအလာတိုးပွားလာ၏နောက်ထပ်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်အကြောင်းအရာပိုကောင်းအောင်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအများအားဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုရှာဖွေနေသောသော့ချက်စာလုံးများကို အသုံးပြု. ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းပြည်တွင်းရေးလင့်များကိုသုံးပါနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများနှင့်အတူ Meta ဖော်ပြချက်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
သင်ကထုတ်ဝြေခင်းမပြုမီသင်၏အကြောင်းအရာပိုကောင်းအောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် WordPress ကို, ကိုအသုံးပြုနေလျှင်တကယ်တော့ Yoast တူသောအချို့သော SEO ဆိုသည်မှာ plugins ကို, ရှိပါတယ်။
6 ။ Long ကအမြီးသော့ချက်စာလုံးများအပေါ်အလေးပေးပြောကြား
ထိုကွောငျ့, သူတို့ကိုပစ်မှတ်ထားသင်ရောင်းအားရန်သင့်ဆောင် converting တစ်ဦးမြင့်မားအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
7 ။ ဧည့်ဘလော့ဂ်
အချို့လူများကအခြားလူများရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များမှာ guest ည့်သည်ပို့စ်တင်တာဟာအတော်လေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့၊ ဒါကသင့်ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုသင် guest ည့်သည်များပို့နေသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ကြားရာတွင်ကူညီနိုင်သည်။ guest ည့်သည်တစ်ယောက်ကိုနာမည်ကြီးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာလုံခြုံအောင်လုပ်ရုံပါပဲ။
သင်အဘို့အကြီးအကျယ်အပြစ်ပေးခံရတက်အဆုံးသတ်နိုင်ကတည်းကသို့သော်သင်သည် spammy နည်းဗျူဟာသုံးပြီးရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
8 ။ သင့်ရဲ့ website မှာဧည့်သည် post ကိုမှဘလော့ဂါများ Invite
အပြင်ကတခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဧည့်ပို့စ်ကနေ, သင်လည်းများလွန်းသင့်ရဲ့ website မှာဧည့်သည် post ကိုအခြားဘလော့ဂါများကိုခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါဘလော့ဂါများအများဆုံးဖွယ်ရှိကြည့်ရှုရဖို့သူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာများတွင်သို့မဟုတ်အခြားဘလော့ဂ်များမှာသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်လင့်ခ်ဝေမျှပါလိမ့်မယ်နှင့်သင့် website ကအဆိုပါယာဉ်ကြောကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်။
သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ website တွင် plagiarized အကြောင်းအရာပို့စ်တင်ဆီကနေဘလော့ဂါများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်တင်းကျပ်ဖြစ်သင့်သည်။
9 ။ လွှဲပြောင်းအသွားအလာကိုဆွဲဆောင်
သင့်ရဲ့ website မှာလင့်ထားသည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတောင်းစားတလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကလင့်ထားသည်စေသည် content ကိုအတူတက်လာမယ့်။ သူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များမှအယူခံမှသကဲ့သို့ထိပ်တန်းထစ်အကြောင်းအရာနှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကသူတို့ရဲ့ website သို့ကချိတ်ဆက်ထက်မကအခြားရွေးချယ်စရာရပါလိမ့်မယ်။
10 ။ LinkedIn တို့ကိုသုံးပါ
အိုကေ! ကျနော်တို့လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းစကားပြောခဲ့ကြပေမယ့်ကျနော်တို့ LinkedIn တို့အကြောင်းကိုအလုံအလောက်စကားပြောရန်နိုင်ပါတယ်။
LinkedIn တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူမှုကွန်ရက်များတွင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ပညာရှင်များအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်များအတွက်ဒါဟာအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးကြောင်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်ဖတ်ပါခံရဖို့ထွက်အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုရယူဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။
11 ။ Microdata အသုံးပြုခြင်း
သူတို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏တွားအတွက်ကူညီခြင်းဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူရှာဖွေနေလုပ်ကတည်းကလည်းသင်ကြိုးစားကြည့်နှင့် metadata နှင့်အတူ microdata အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ site ကိုမှဧည့်သည်များတိုးမြှင့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ website မှာစာမကျြနှာကိုရှာတွေ့ခြင်းနှင့်အညွှန်းထည့်နေပုံကိုအတွက် search engine ကိုစက်ရုပ်ကကူညီပါလိမ့်မယ်။
12 ။ ပြည်တွင်းရေးလင့်များကိုသုံးပါ
အခြား site သည်သင်ပြန်လင့်ထားသည်ရှိခြင်းအပြင်, သငျသညျလညျးသငျ့ရဲ့ content တွေကိုအကြားကိုလင့်ထားသောပြည်တွင်းရေးလင့်များရှိသင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအချင်းချင်းဆောင်းပါးသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လင့်ထားသည်နိုင်ပါတယ်။
13 ။ စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အင်တာဗျူးများ Publish
လူတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရင်းမြစ်များမှသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ရှာဖွေနေသည်နှင့်မီဒီယာများတွင်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးအင်တာဗျူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကခဲယဉ်းသည်ထင်ပေမယ့်ဈေးကွက်ခေါင်းဆောင်များမှအီးမေးလ်များကိုထွက်ပေးပို့နှင့်သင်အမှန်တကယ်အင်တာဗျူးရှိသည်ဖို့လိုခငျြမည်မျှအံ့ဩမိန်းမောကြလိမ့်မည်ပေမည်။ တစ်လမ်းထဲမှာ, အင်တာဗျူးလည်းသူတို့ရဲ့ profile ကိုတည်ဆောက်နှင့်သူတို့တတ်နိုင်သမျှအများအပြားအင်တာဗျူးရှိသည်ဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။
ဤနည်းဗျူဟာ၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာအငျတာဗြူးသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာအတွက်အင်တာဗျူးဖို့လည်းအများဆုံးဖွယ်ရှိ post ကိုသို့မဟုတ် link ကိုလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
14 ။ အီးမေးလ်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
သငျသညျဖောက်သည်တစ်ဦးမှတစ်ခုခုရောင်းချလျှင်, သင်ပြီးသားသူတို့ရဲ့အရသာကိုသိနှငျ့သငျသူတို့ချင်ပါတယ်ထင်အသစ်တစ်ခုခုကိုတက်လာသည့်အခါတိုင်းသင်သည်ထိုသူတို့ကို update နိုင်ဘူး။
15 ။ သင့်ရဲ့ site ကိုတုံ့ပြန်မှု Make
ယနေ့ခေတ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ PC များအပေါ်သူတို့လုပ်ပေးထက်ပိုသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းအပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရယူသုံးနေကြသည်။ ထို့ကြောင့်, သင့်ရဲ့ website မှာစမတ်ဖုန်းများနှင့်ပိုပြီးဒါသေးငယ်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုဘို့ optimized ကြောင်းအာမခံပါသည်။
16 ။ သင့်ရဲ့ site ကိုမြန်သေချာ
တစ်ဦးကဧည့်သည် 1 မိနစ်များအတွက် load လုပ်ဖို့ site တစ်ခုစောင့်ဆိုင်းမည်မဟုတ်။ တောင်မှ 30 စက္ကန့်ထားပြီးစောင့်ဆိုင်းရန်လည်းပျင်းစရာခံစားရပါတယ်။
အဆိုပါ site ကိုမီလီစက္ကန်အတွက်ဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ်။ ပိုမိုမြန်ဆန်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အပိုဧည့်သည်များကလွယ်ကူစာမျက်နှာများမှတဆင့်သွားနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သူတို့မဝယ်သို့မဟုတ်များအတွက်ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုခုရှာတွေ့မှတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
17 ။ တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်း Build
သင့်ရဲ့ website မှာတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းပြောဆိုမှုများကျင်းပရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒါ့အပြင်လွယ်ကူသောပစ်မှတ်အဖြစ်ရပ်ရွာလုပ်ရပ်အင်္ဂါသင်အသစ်များတစ်ခုခုရှိအခါတိုင်း။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျဖြစ်နိုင်သောနှင့်တတ်နိုင်သမျှနေရာအများအပြားထဲကနေသကဲ့သို့လူများစွာတို့ပါဝင်သည်ဖို့အသိုင်းအဝိုင်းတိုးချဲ့အပေါ်အဓိကလည်းသင့်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်တုံ့ပြန်ချက်ပေးနိုငျသောမှတဆင့်နည်းလမ်းများတိုးချဲ့သင့်ပါတယ်။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအများအပြားဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းကြောင်းများအဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သင်မေးခွန်းများကိုမေးရန်လူတို့အဘို့ဖိုရမ်ရှိနိုင်ပါသည်။
18 ။ တူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်စဉ်းစားဟန်မှတ်ချက်များ Make
ထင်စားစရာဖြစ်ကြောင်းအတူတူစက်မှုလုပ်ငန်းန်းကျင်အမျိုးမျိုးသောက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်မှတ်ချက်များကိုအောင်အသုံးပြုပုံသင်တို့အဘို့နာမည်တစ်ခုဖြစ်စေမည်။ သင်အလွယ်တကူမှတ်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော၌သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု link ကိုကျဆင်းနေခြင်းအားဖြင့်သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာနောက်ကျောချိတ်နိုင်သည့်ကြီးမားသောအောက်ပါအချက်များကိုရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
19 ။ သင့်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအချက်အလက်များ၏ခြေရာခံပါ
အဆိုပါ analytics data ကိုသငျသညျကိုဘယ်လိုသင့်ရဲ့ site ကိုဝိုင်းတစ်ဦးအမြင်ပေးသည်။ ဒါဟာသင်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်စာမကျြနှာသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်ကိုလည်းသင်ဧည့်သည်၏အသက်အပိုင်းအခြားကိုပေးသည်။
20 ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်တက်ကြွစွာဖြစ်လာ
တစ်ဦးတည်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရေးကိုကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်လူမှုမီဒီယာအသိုင်းအဝုိင်းတွင်ပိုမိုတက်ကြွစွာဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှအများအပြားလူမှုမီဒီယာဆွေးနွေးမှုများ join ။ သင်တစ်ဦး twitter အကောင့်ရှိပါကဥပမာ, သင်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသက်ဆိုင်ရာ hashtags ကိုရှိသည်သောအုပ်စုတစ်စုဆွေးနွေးမှုများ join သငျ့သညျ။
21 ။ Aggregators က်ဘ်ဆိုက်များမှဒေတာများ Submit
aggregator ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာစုဆောင်းအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာဒေတာနေရာချထားနိုင်အောင်အတူတကွကြောင့် data ကိုထားတော်မူ၏။ စုစည်းက်ဘ်ဆိုက်များမှ content တွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်လည်းစုစည်းဆိုဒ်များကနေဧည့်သည်များရတဲ့၏ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဥပမာ Reddit နဲ့ Quora ဖြစ်ကြသည်။
22 ။ ဗီဒီယိုများကိုသုံးပါ
ဗီဒီယိုများအဖြစ်စွဲမှတ်စရာကောင်းသောအရာမရှိပါ။ လူအများစုကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗွီဒီယိုရိုက်ခြင်းများလုပ်နေကြသည်။ Visual content သည်စာသားအခြေခံအကြောင်းအရာထက် ဦး နှောက်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုထိန်းသိမ်းရန်ဖန်တီးသည်။
23 ။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုနားလည်
သင်ပိုကောင်းသူတို့ကိုအမှုအရာလုပ်နေတာတစ်လမ်းကိုရှာဖွေနိုင်အောင်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဘာလုပ်နေကြသူသုတေသနနှင့်သိရန်ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက်အကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့မှ BuzzSumo နဲ့တူဆော့ဖျဝဲနိုင်။
သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် သိ. အားဖြင့်, သင်သည်လည်းသင်၏အဖောက်သည်ကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါအကြောင်းအရာများ၏ကြင်နာကိုသိနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။
24 ။ Webinars
လက်ရှိကမ္ဘာမှာမှာတော့လူတိုင်းတစ်ဦးအပိုအရာလေ့လာသင်ယူရန်ရှာဖွေနေသည် webinars သင်ယူမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
ထို့ကွောငျ့, webinars hosting နေဖြင့်အသွားအလာကောင်းတစ်ဦးငွေပမာဏဝင်ငွေလိမ့်မယ်။ သငျသညျ webinars ဘို့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်ခြားအခြေခံပေါ်မှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ထွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သင်ရုံတချို့ရက် webinar နေ့စွဲမတိုင်မီ "သူတို့အပေါ်မှာ webinar ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်း" နဲ့တူစကားလုံးများကိုရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျလူမှုရေးမီဒီယာမှတဆင့်တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ webinars မြှင့်တင်ရန်သင့်ပါတယ်။
25 ။ ညီလာခံမှာစကားပြောသော
အပြင်ညီလာခံတက်ရောက်ခြင်းကနေ, သင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သင်၏ခြေကိုငုတ်နှင့်သင့်နောက်လိုက်အကြားယုံကြည်မှုရရှိသကဲ့သို့သောသူတို့ကိုညီလာခံမှာစကားပြောကာအခွင့်အလမ်းများအတွက်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ဒါကလမ်း, သင်ကအတွေးခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြဲမြံစေမည်နှင့်သင့် site ကိုအလုံအလောက်ထိတွေ့ရတဲ့တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။